Inqaku le-AnTuTu kwiLenovo Z6 Pro lityhilwe | I-Androidsis
Iqhelekile into yokuba ii-smartphones ezizayo zivele kwiibenchmarking apps ezinje nge-AnTuTu, iGeekbench, kunye ne-Master Lu, kwaye ngamanye amaxesha yinkampani ngokwayo etyhila la manqaku ngaphambi kokumiliselwa.
Ngeli xesha, yayingu-Sekela Mongameli we-Lenovo u-Chang Cheng othathe isigqibo sokwabelana nge Amanqaku ka-AnTutu I-Lenovo Z6 Pro Ngeakhawunti yakho yeWeibo. Ayothusi into yokuba, iflegi elandelayo yesigebenga saseTshayina iyakwazi ukufumana amanqaku kakuhle kwiqonga lebhentshi.
Kumfanekiso okwabelwana ngawo nguChang Cheng esiwubonileyo ngezantsi, kunokubonwa oko iLenovo Z6 Pro ifumene amanqaku angama-403,077 kwi-AnTuTu. Abanye iiflegi nge Snapdragon 855 bathambekele ekufumaneni amanqaku angaphantsi kwama-400, ke eli linani elibalaseleyo. Nangona kunjalo, sihlala sibona ukuba amanqaku asemthethweni anyuselwe ngakumbi kunobomi bokwenyani.
I-Lenovo Z6 Pro kwi-AnTuTu
Sele sizazi iinkcukacha ezithile zeLenovo Z6 Pro. Iselfowuni iya kuba nefayile ye- Ukuseta ikhamera ye-Quad ngasemva netekhnoloji yeVidiyo yeHyper. Sigubungele ukuhanjiswa kwefowuni kunye nobume bekhamera ngokweenkcukacha. apha.
Ukujonga iifowuni zefowuni, siyayazi loo nto izakuza ne-Snapdragon 855 ngaphakathi, njengoko besele sibonile, ngeelensi ezinkulu ze-2.39cm kunye nekhamera ephambili ye-48 MP AI. Ukuseta ikhamera ye-quad iyakwazi ukuthatha iifoto ze-MP eziyi-100. Ukongeza, inkampani iyiqinisekisile Intsebenziswano nomdlalo webhola wohlobo lomdlalo wophuhliso lwale fowuni.
Okokugqibela, kufanelekile ukugxininisa kwakhona ukuba indawo ephezulu yokusebenza kwefemu yaseAsia izakwaziswa ngokusesikweni nge-23 ka-Epreli elandelayo (ngaphantsi kweveki). Ke hlala ubukele ezinye iinkcukacha. Siza kugubungela ukwenziwa ngokusemthethweni kweselfowuni kwaye sinike zonke iinkcukacha malunga nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Amanqaku e-AnTuTu kwiLenovo Z6 Pro abonakalisiwe
I-OnePlus 3 kunye ne-3T zifumana iPie ye-Android 9 eYurophu